विदेशी Nemesia - बीउ देखि बढ्दै
उज्ज्वल र आकर्षक बिरुवाहरु Nemesia - सबैभन्दा सुन्दर फूल को एक, Annuals। स्टेम उचाइ को प्रकारको आधारमा 40-50 सेमी पुग्न सक्दैन, त्यसैले यो अक्सर फूल बर्तन र बालकनी बक्से सजाउनु गर्न प्रयोग गरिन्छ। रसदार हरियो एक चित्रित बच्चा रंग तन्तु जस्तै ठूलो द्वारा complemented छन् stems।
। ग्रेड आधारमा मूल्य फूल, जस्तै फरक हुन सक्छ, Nemesia zobovidnaya पहेंलो, रातो, सुन्तला वा गुलाबी inflorescence व्यास अप 2.5 सेमी प्रत्येक ग्रेड छ - यसको रंग, माथिल्लो भागमा नै पिच हुन, र तल्लो contrasting रंग हुन सक्छ। लोकप्रिय Nemesia एक चिरपरिचित प्रतिनिधि - "डेनिस झण्डा" सेतो तल र रातो शीर्ष छ। florescence जुन देखि मध्य-अक्टोबर गर्न अवधिमा पर्छ। आँखा खुसी लामो समय को लागि Nemesia फूल गर्न जरूरी, मृत बोट भागहरु को छाँट्ने छ। यो प्रक्रिया नयाँ मार को वृद्धि र अतिरिक्त तन्तु को गठन को बढावा।
Nemesia - कुनै पनि समस्या र कदम बिना बीउ देखि बढ्दै:
संयंत्र एकदम siting मामलामा undemanding छ, तर खुला घाम क्षेत्रमा अझै पनि विकास गरिएको छ राम्रो। तर, नयाँ किसिम Nemesia heyrantusovidnaya पूर्ण आंशिक छाया मा बढ्छ। यो फूल को कुनै प्रजाति गर्मी मा एक लामो समय हुन सक्दैन, र एक सुकेको माटो मा।
सामान्य उर्वर माटो, यो धेरै राम्रो-भोकमरी छ, नम र प्रकाश चुनिएको छ। यसलाई अलिकति अम्लीय वा तटस्थ soils हुन सक्छ।
सबैभन्दा घर बागवानी मा unpretentious - Nemesia संकर, एक बीउ देखि बढ्दै कुनै पनि नव आगन्तुक उपलब्ध छ। यो बोट बिरुवा तयार वा सीधा खुला जमीन मा रोप्न गर्न सम्भव छ। Nemesia बीउ 1 G सात हजार टुक्रा सम्म समावेश हुन सक्छ कि त सानो छ। सन्तानको अंकुरण दुई वर्ष सम्म भण्डारण गरिएको छ। यो बिरुवा धपाउने निर्णय थियो भने, बाली तुरुन्तै सानो प्लास्टिक कप मा, बक्स र एक ग्रीनहाउस मार्फत जाँदै बिना उत्पादन। Nemesia transplanting सहनु छैन, त्यसैले बिरुवा को व्यक्तिगत बर्तन वृद्धि को प्रमुख स्थान मा "डम्प" गर्न सजिलो हुनेछ। रोपेको समय - फेब्रुअरी र अप्रिल को अन्त।
एक सानो छर्कनु को बीउ जमीन र ग्लास वा फिलिम ढाकिएको रोपण गर्दा आवश्यक चिस्यान कायम गर्न। एक पटक दिन गिलास को जीवाणुहरू हवादार र अतिरिक्त condensate हटाउन तल फिर्ता।
छ देखि आठ दिन Nemesia वृद्धि पछि, बीउ देखि बढ्दै जो बाहिर एकदम सरल हुन गरियो। सानो बीउ हिप र मांग रुचि बढ्दै छन्। युवा फूल मा रसीला ब्रश लागि टिप चिमोटे। thermophilic को किनभने मई मा जमीन मा रोपण अघि, बिरुवा कठोर हुनुपर्छ। को ब्रश बीच दूरी अन्यथा बोट कतै बढ्न हुनेछ, 20-25 सेमी भन्दा कुनै कम हुनु पर्छ - यो चाँडै बाहिर झिकेर र मर्न गरिनेछ।
तपाईं बगैचा Nemesia मा आवश्यक छ भने, फूल बीउ को खेती पहिले नै अप्रासंगिक हुन सक्छ। को frosts अब सम्भव छ जब लेट मई, - वृद्धि र प्रशस्त फूल बिरुवाहरु लागि मध्य छरिएको छन्। सधैं तातो दिन समयमा प्रशस्त - अंकुरण पछि टीन मौसम फिट हुनुपर्छ, रुचि र Topping खर्च। अन्य बोट साथ सँगै Nemesia रोपेर छैन: प्रयास गर्नुहोस्।
चमेली - सुगन्धित फूल संग एक shrub
Currants: रोपण र हेरविचार
Budleya - रोपण र हेरविचार, खेती र प्रजनन
हाइब्रिड चिया आश्रम
कम टमाटर असंख्य मानिसहरूले
ख्याल र खेती। pansies
निसान Patrol - शक्तिशाली कार
Dzhekson Martines: यो कोलम्बियाई फुटबल खेलाडी र स्ट्राइकर को क्यारियर "Atletico मैड्रिड" बारेमा सबैभन्दा रोचक कुरा हो
Warships को विश्व मा ब्याटलसीपखेल "मनटाना": पम्पिंग मा समीक्षा र हाइड
बुल्गेरियन साम्राज्य: घटना इतिहास
मा humidifier ब्याट्री: समीक्षा, सुविधा र उपयोगी गुणहरू
इजेभ्स्क को ओपेरा र ब्यालेट थिएटर: इतिहास, मुग्ध पार्ने संगीतको, फोटो र समीक्षा
वयस्कों मा दस्तुर को उपचार। तैयारी, लोक उपचार
न्यूयर्क मा स्किस्क्र्रायर क्रिसलर बिल्डिंग
सेन्ट लूका एक प्रार्थना कसरी मदत गर्न?
कट्टर के हो?
किन Trimmer पेट्रोल सुरु? कारण र समाधान